Makatsi - Noti Katsi | Noti Katsi (Peji 3)
Katsi dzinoenda kumwedzi here?
Iwe ungade here kuziva kana katsi dzaguma kuenda kumwedzi? Zvakanaka, usazeze: pinda ugopindura mubvunzo wako kuitira kuti usvike pakuziva vasikana vako vane furry zvirinani :)
Canti Kudya Chizi?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinogona kudya chizi? Kana zvirizvo, pinda uye isu tichakuudza mhinduro kumubvunzo iwoyo. Usapotsa.
Zvinokonzera uye kurapwa kwekatsi weti makristasi
Tsvaga zvese nezve katsi weti makristasi: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa. Dzidza zvese nezve imwe yeakajairika matambudziko ehutano feline.
Ndeipi tarisiro yeupenyu katsi dzine lymphoma?
Pinda uone kuti ndeipi tarisiro yehupenyu hwemakati, kukosora lymphoma, chirwere chinogona kuuraya kana chisina kurapwa munguva
Iwe une mibvunzo nezve kutonhodza kati? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tichakuudza zvese zvaungaite kuti furry yako itonhorere.
Kune katsi dzisina muswe here?
Wakambozvibvunza here kuti kune katsi dzisina muswe? Zvakanaka, pinda uye isu tichakuudza kuti ndeapi mabhuru ane hunhu uye nei.
Zvisina-chepfu zvirimwa zvemakati
Kana iwe uchida kuziva kuti ndezvipi zvisina-chepfu zvirimwa zvekitsi uye nechengetedzo yavo yakakosha, pinda uone kuti mangani aripo anogona kujekesa imba yako.
Chlamydia inobatwa sei mumakati?
Tsvaga kuti ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwechlamydia mumakati, chirwere chine njodzi huru yekutapurirana pakati pemakatsi ane furry.
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwe fibrosarcoma mumakati?
Wanga uchiziva here kuti fibrosarcoma mumakati chirwere icho, kana chikasarapwa, chingakonzera kufa? Pinda kuti uzive maitiro ekuzvidzivirira.
Sei kubata kwekuzvarwa kuchikosha kumakati? Kana iwe uine kusahadzika, usazeze kupinda uye zvakare uzive kuti ungazviita sei.
Utachiona hwemukati mumakati hwakajairika. Kana iwe uchida kuziva kuti ndezvipi zviratidzo uye kuti ungazvibvisa sei, pinda.
Chete 5% yeDNA yekati yatinayo kumba inoisiyanisa nedzimwe. Saka chii chauri kumirira kuti uone kuti fanano dzipi dziri pakati pekati nengwe?
Nei katsi dziwana zita rakaipa?
Wati wamboshamisika here kuti nei katsi dziine zita rakaipa? Kana zvirizvo, pinda mukati tigadzirise kusahadzika kwako nekuyedza kubvisa ngano dzinovatenderedza.
Imbwa dzako dzine furry dzine matambudziko ekutsenga kana miromo inorwadza Kana zvirizvo, pinda tinokuudza kuti chii chinonzi periodontitis mumakati uye kuti inorapwa sei.
Katsi neshiri, zvinogona kugara pamwe chete here?
Wakambozvibvunza here kuti katsi neshiri zvinogona kugara pamwe chete pasina matambudziko? Zvakanaka, usazeze: pinda uye tinokuudza kana zvichibvira kana kuti kwete. ;)
Zvikonzero zvekutora kati yekare
Kufunga kuunza furry kumba? Pinda uye isu tichakuudza zvikonzero zvinoverengeka zvekutora katsi yekare, nekuti naivo vanofanirwa kufara.
Katsi imhuka dzinoshamisira here?
Uri kushamisika kana katsi mhuka dzekunze? Kana zvirizvo, pinda uye tinokuudza zvishoma nezvenhoroondo yake nemunhu.
Sei katsi dzichikanda zvinhu
Uri kushamisika kuti sei katsi dzinokanda zvinhu pasi? Kana zvirizvo, usazeze uye pinda kuti tikwanise kugadzirisa mubvunzo wako.
Ko katsi dzinomirirei mutsika dzakasiyana?
Wati wakambozvibvunza here kuti katsi dzinomiririra mutsika dzakasiyana? Kana iwe uchida kuziva, pinda uye isu tichapindura mubvunzo wako :).
Zvirwere hutachiona hwemakati
Pinda uye isu tinokuudza kuti ndedzipi dzinowanzoitika hutachiona hutachiona hwemakati, pamwe nezviratidzo zvavo kuti uzive paunofanira kuenda navo kun'anga.
Iko kushanda kwevadzidzi mukitsi
Wati wakambozvibvunza here kuti basa rei revadzidzi mukatsi? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tichagadzirisa kusahadzika kwako.
Eclampsia mumakati inogona kusimuka panguva yepamuviri kana lactation iyo inofanirwa kuzivikanwa. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chii zviratidzo uye kurapwa chii.
Feline inotapukira anemia
Pinda uye isu tichakuudza kuti ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwechimwe chezvirwere zvakakomba katsi dzinogona kuva nacho:
Nzira yekudzivirira katsi yako kubva kunyorovesa mubhedha
Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekudzivirira kati kuti iite weti pamubhedha (kana mune chero imwe nzvimbo isingadiwe). Tsvaga zvekuita kuti ugare uine hutano hwakanaka.
Kurudziro yekusiya katsi chete pamba
Uri usipo kazhinji here? Pinda uye isu tinokupa iwe yakateedzana yekurudziro yekusiya katsi dzoga pamba pasina iwe kuti usazvidya moyo.
Zvinodhura zvakadii kununura kati kubva mumugwagwa
Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti zvakadii kununura kati kubva mumugwagwa, uye kuti zvinoitwa sei kuti mhuka itambure zvakanyanya kudzvinyirira.
Migumisiro yezuva paganda rekati
Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti mhedzisiro yezuva iri paganda rekati. Tsvaga kuti nei kudzivisa kunyanyisa kuve kwakakosha.
Maitiro ekuziva kana katsi yangu iri kuchema yakawandisa
Ungaziva sei kana katsi yangu ichinyanya kuwanda? Kana iwe uine kusahadzika, pinda mukati uye isu tichakuudzawo iwe zvaunogona kuita kuti ubatsire iwe uve wakadzikama.
Kutya nzvimbo dzakakwirira mumakati
Wanga uchiziva here kuti kutya kwehurefu mumakati kuri kwechokwadi? Zvinogona kunge zvakaoma kutenda, asi chero furry inogona kuinzwa. Pinda tinokuudza kuti ungavabatsira sei.
Kurapa kati isina zororo mumota
Pinda tinokuudza maitiro ekurapa katsi isina kugadzikana mumotokari kuti uzive matanho aunotora kuitira kuti mhuka igadzikane sezvinobvira.
Zvaunofanira kuita kana katsi ichirwisa kazhinji
Uri kushamisika kuti chii chaunofanira kuita kana kati ichirwisa kazhinji? Kana zvirizvo, usazeze uye pinda kuti uone kuti matanho api aunofanirwa kutora kuti uchinje.
Nei zvakaoma kuchengeta katsi ichangoberekwa isina amai?
Pinda tinokuudza kuti nei zvakaoma kuchengeta katsi ichangoberekwa isina amai. Tsvaga kuti ndezvipi zvaunoda kuti uwane kumberi.
Matipi ekutsigira katsi
Shamwari yako iri kusuruvara here? Pinda uye isu tinokupa iwe akateedzana matipi ekukurudzira katsi iyo inobatsira zvikuru. Usapotsa.
Kuchengeta katsi mumatsutso
Pinda uye isu tichakuudza kuti chii chiri kuchengetwa kwekati mumatsutso, mwaka umo uchasangana nhevedzano yekuchinja kwemuviri uye kwepamoyo.
Tapeworm mumakati chimwe chezvirwere zvakajairika zvehutachiona. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chii zviratidzo uye kuti inorapwa sei.
Geriatric zera remakati
Iwe unoziva here iyo makore egeriatric emakati? Kana paine kusahadzika, pinda uye isu zvakare tichakuudza zvekuita kuti vararame zvirinani pazera iri.
Maitiro ekudzivirira hutachiona hwehutachiona mumakati
Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekudzivirira hutachiona hwehutachiona mumakati. Tsvaga zvaunogona kuita kuti furry yako igare yakasimba.
Maitiro ekuudza kana kati ine matambudziko emoyo
Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuziva kana kati ine matambudziko emoyo. Tsvaga kuti ndezvipi zviratidzo uye zvekuita kumubatsira.
Yakawanda sei katsi inofanirwa kuwana pazuva
Wati wamboshamisika here kuti ingani kurovedza kati kunofanira kuita pazuva? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tichagadzirisa kusahadzika kwako kuitira kuti furry yako ifare.
Haisi chokwadi kuti ndedzipi mhando dzekatsi mitambo iripo? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tikutaurire kuti ungatamba sei neako furry kuti ugare achifara.
Kurapa kwepfungwa nekitsi kunoshanda sei?
Wati wambofunga here kuti kurapwa kwepfungwa kunoshanda sei nekitsi? Zvakanaka, usazeze: pinda uye ini ndikuudze kuti nei zvichikosha.
Iyo yekubereka kutenderera kwekatsi
Pinda uye isu tinokuudza zvese nezve kubereka kutenderera kwekitsi kuti iwe udzidze zvakawanda nezve mhuka idzi. Tsvaga kuti ndeapi matanho ekupisa, uye nezvimwe.
Kune mahombekombe emakati here?
Wati wambofunga here kana kune mahombekombe emakitsi? Kana zvirizvo, usazeze uye pinda kuti uzive mhinduro kumubvunzo uyu unonakidza.
Alopecia mumakati idambudziko rinogona kukanganisa chero feline. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chii zviratidzo uye zvinokonzeresa kuti iwe uzive maitiro ekumubatsira.
Manyepo nezve nhumbu nekatsi
Nanhasi kuchine nhema pamusoro pekubata uye katsi. Pinda uye isu tinokuudza iwe kana ivo vachienderana neichoicho kana kwete.
Mashoko pamusoro peziso remakati
Pinda uye isu tinokupa iwe yakawanda ruzivo nezve maziso emakati. Tsvaga kuti sei vachiona murima, maonero avanoita nyika, uye zvimwe zvakawanda.
Chii chekuita kana kati ikabuda ropa kubva mumhino?
Chii chekuita kana kati ikabuda ropa kubva mumhino? Kana furry yako yatanga kuzviita, pinda mukati isu tigokuudza kuti sei zvingave zvakaitika kwaari uye kuti ungamubatsira sei.
Vestibular syndrome mumakati
Pinda uye isu tinokuudza kuti vestibular syndrome mumakati chii uye kuti inorapwa sei, yakajairika chirwere chetsinga mumhuka idzi.
Zvinokonzera feline immunodeficiency virus
Pinda uye isu tichakuudza kuti ndezvipi zvikonzero zve feline immunodeficiency, zviratidzo zvayo uye kurapwa kwayo kuitira kuti iwe uzive zvekuita kana kati yako ichirwara.
Hyperapego mumakati, dambudziko rakakomba
Pinda uye isu tinokuudza izvo hyperapego iri mumakati uye kuti iwe ungaziva sei kana iwe unayo kana kuti kwete. Zvakare tsvaga kuti inogona kugadziriswa sei.
Nyaya yaLux, katsi akabvuta mhuri yake
Tinokuudza nyaya yaLux, katsi akabata mhuri yake mushure mekukwesha mwana. Pinda uone kuti zviri sei manje.
Nzira yekuziva sei kuti kati ine matambudziko emanzwiro
Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuziva kana katsi ine matambudziko emanzwiro, nekuti dzimwe nguva hazvisi nyore kuziva kana iine kana kwete.
Feline asthma, chirwere chine njodzi
Feline asthma chirwere chinogona kuuraya kana chikasiiwa chisina kurapwa. Pinda uye uone kuti chii zviratidzo uye kurapwa kwavo.
Nei katsi yangu ichiruma ruoko rwangu
Nei katsi yangu ichiruma ruoko rwangu? Kana iwe uri kushamisika, pinda mukati uye isu tichakuudza iwe kuti ungagadzirisa sei hunhu uhu.
Maitiro ekitsi dzePersia
Pinda uye isu tinokuudza iwe maitiro ehukama hwePersia katsi. Tsvaga kuti ndeipi imwe yemhando dzinozivikanwa kwazvo dzekati munyika.
Mamota eganda mumakati
Pinda uye isu tinokuudza kuti ndeapi anowanzo kuve mamota eganda mumakati uye nei uchifanira kuenda nawo kuna vet nekukurumidza.
Zvinoita here kugara pamwe kwekatsi mbiri pamba?
Ungade here kuziva kuti kugarisana kwekatsi mbiri pamba kunogoneka here? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tichakuudzawo kuti ungavatambira sei.
Mashoko pamusoro pemutauro wemakati
Pinda uye isu tinokupa iwe yakawanda ruzivo nezve mutauro wemakati, chikamu chinonyanya kufarira chemuviri wavo. Usapotsa.
Ascariasis mumakati chirwere chinotapukira uye chinotyisa chinopararira icho, kana chikasarapwa, chinogona kuuraya. Pinda uye uzviwane.
Kunhuwirira kunokwezva katsi
Ndedzipi hwema hunokwezva katsi? Kana iwe uchida kuti shamwari dzako dzine furry dzinzwe dzakasununguka kugara newe, pinda mukati uye tichapindura mubvunzo wako.
Katsi Dzinogona Kuva Shamwari Nevacheche?
Ungade here kuziva kuti katsi dzinogona kushamwaridzana nevacheche? Pinda uye isu tichakuudza yedu maonero, uye akateedzana matipi kuitira kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Maitiro emakate akaraswa
Iwe ungade here kuziva kuti ndeupi mufambiro wekatsi dzakaomeswa? Pinda uye zvakare uwane kuti nei zvakakosha kuti utore ivo kuti vashande.
Mhedzisiro yekurwa kwekati
Pinda uye isu tichakuudza iwe mhedzisiro yekurwa kwekati iri. Zvakare tsvaga kuti nei zvichikosha kukanda hura hwedu.
Aloe vera yekatsi ine leukemia
Inobatsira sei aloe vera kumakati ane leukemia? Kana vako vane furry vachitambura nechirwere ichi uye uchida kuvandudza hupenyu hwavo, pinda.
Maitiro ekuchengeta katsi ichangobva kushanda
Pinda tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi ichangobva kuvhiyiwa kuitira kuti ikwanise kupora nekukasira. Tevedza matipi edu ekumufadza zvakare.
Yakagadziriswa Kudzvinyirira muKitsi
Kudzoreredza hukasha mukatsi ndeimwe yematambudziko akajairika ehunhu uye chimwe chezvakanyanya kutyisa. Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuvabatsira.
Kazhinji katsi nzeve nzeve
Pinda uye uone kuti ndedzipi hosha dzinozivikanwa munzeve dzekatsi uye zvaunofanira kuita kuvarapa uye kuvaita kuti vapore
Mhedzisiro yekushushikana mumakati
Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti ndeipi mhedzisiro mikuru yekushushikana mumakati. Tsvaga kuti nei zvakakosha kuvachengeta sezvavanokodzera.
Kujairika maitiro ekitsi
Enda mukati kuti uone kuti ndedzipi dzimwe tsika dzisinganzwisisike dzekati uye zvavanoreva. Tsvaga kuti sei vachiita nezvavanoita.
Nzira yekusarudza yakanakisa katsi chikafu?
Iwe hauzive kusarudza yakasarudzika katsi chikafu? Pinda uye ngatibatsire iwe kusarudza chikafu cheshamwari yako yakanaka-ina-makumbo.
Nzira yekudzivirira sei kufutisa mumakati?
Ungade here kuziva nzira yekudzivirira kufutisa mumakati? Pinda uye isu tichakupa mashoma matipi ayo anozobatsira kwazvo kuchengetedza furry rako riine hutano.
Matipi ekubvisa tartar mumakati
Pinda uye isu tichakupa mashoma matipi ekubvisa tartar mumakati. Tsvaga kuti nei kuchengeta mazino ako kuchikosha.
Zvaunofanira kuita kana iwe ukawana marara emakati mumugwagwa
Iwe ungade here kuziva zvekuita kana iwe ukawana marara emakati mumugwagwa? Pinda uye isu tichakuudza maitiro ekuita zvichienderana nezera ravo.
Katsi yangu inogona kunwa chero mhando yemvura here?
Uri kushamisika kana katsi yangu inogona kunwa chero rudzi rwemvura? Kana zvirizvo, pinda uye isu tichakuudzawo kuti ndeupi akamunakira.
Zvirwere zvinouraya mumakati
Katsi mhuka idzo, chero bedzi vaine zvese zvavanoda uye vachichengetwa zvakanaka, havafanirwe ...
Iyo hwema hwemuviri wekatsi
Kunhuwirira kwemakitsi ane hutano hakukanganisike mumhino dzevanhu, asi nei dzimwe nguva vachinhuwirira zvakashata? Pinda uye isu zvakare tichakuudza maitiro ekuvabatsira.
Isu tinokuudza zvese nezve kusagadzikana mukitsi: zvikonzero zvacho, kurapwa kwayo nezvimwe. Pinda uye uone kuti ungabatsira sei mhuka idzi kuti dzive nani.
Zvirwere zvekuzvarwa mumakati
Isu tinokuudza kuti ndedzipi hosha dzekuzvarwa nadzo mumakati kuti iwe uzive kuti ndeapi anogona kukanganisa ako ane furry uye maitiro ekuita kana ivo vachitambura kubva kune chero
Ngano yekuda kuziva kwekatsi
Chii chiri chokwadi nezve ngano yekuda kuziva katsi? Kana iwe uchida kuziva, usazeze: pinda mukati uye isu tichakuudza iwe kuti iwe ugogona kusvika pakuvaziva zviri nani.
Nzira yekudyisa koloni yemakati
Nzira yekudyisa sei koloni yemakati? Kana iwe uchizotanga kuchengeta dzimwe mhuka dzine mvere, pinda mukati uye tichapindura mubvunzo wako kuti vagone kupora.
Isu tinokuudza iwe kuti makitsi anofanirwa kunge achifambidzana sei kuitira kuti vakure vachishivirira vanhu. Pinda uteedzere kuraira kwedu :).
Mboro yangu ine pakafunuka, ndingamubatsira sei?
Uri kushamisika kuti nei katsi yangu iine kuluma uye kuti ungamubatsira sei? Pinda uye isu tichakuudza zvese nezve ichi chinoshamisa uye chine ngozi chirwere.
Zvikonzero zvekutora katsi nhema
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zvikonzero zvikuru zvekutora katsi nhema. Pinda uye uone kuti nei iri zano rakanaka kugara nemumwe. ;)
Kittens isina zororo: ungadzikamisa sei?
Iwe unogara nekiti dzisina kugadzikana here? Pinda tinokuudza zvaunogona kuita kuvabatsira kupisa simba rese ravanounganidza uye kugara zvakanaka navo.
Katsi imhuka yekumusha?
Ichokwadi here kuti katsi imhuka yekumusha? Kana iwe uine uyu mubvunzo uye uchida kuupindura nekukurumidza sezvazvinogona, pinda uye isu tichakuudza zvatinofunga nezvazvo. ;)
Wati wakambozvibvunza here kuti ndedzipi stereotypes uye dzinoonekwa sei mumakati? Kana zvakadaro, iwe une rombo rakanaka! Pinda uye uwane, mukuwedzera, mabatiro avanobatwa.
Manias mumakati: idambudziko here kana kuti ivo chikamu chechisikigo chavo?
Iwo mafeline anogara nesu anoratidza mamwe maitiro ekuda kuziva. Kana iwe uchida kuziva zvese nezve inofungidzirwa manias mumakati, pinda.
Nzira yekubvisa mboro yangu
Vanhu vazhinji vanoshamisika kuti sei kubvisa katsi yangu. Usati waita chero chinhu, tinokukoka iwe kuti uverenge ichi chinyorwa.
Nei paine chikafu chisina chibage
Nei paine chikafu chisina chibage? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu zvakare tichakuudza iwe kuti ndeapi mabhenefiti avanazvo.
Matipi ekutarisira zvakanaka katsi
Iwe unoda here zano rekutarisira zvakanaka kitsi? Pinda tinokupa mashoma kuitira kuti kugarisana kuve kwakanakira mhuri yese.
Chii chinonzi feline ethology
Iwe ungade here kuziva izvo feline ethology zvidzidzo uye riini zvinokurudzirwa kubvunza kune ethologist? Kana zvirizvo, chii chekumirira kuti upinde? ;)
Mafuta omuorivhi akanaka kune katsi here?
Mafuta omuorivhi akanaka kune katsi here? Kana iwe uchida kuziva mhinduro yemubvunzo unonakidza, pinda uye uzive.
Katsi dzinonhuwirira kutya here?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinonhuwirira kutya? Kana zvirizvo, pinda tinokuudza kana chiri chokwadi kana zvisiri kuti ugone kuvanzwisisa zviri nani.
Maitiro ekurapa kutya dutu mumakati
Isu tinotsanangura maitiro ekurapa kutya kwemadutu mukitsi, nemazano uye zvidobi izvo zvinobatsira yako furry kuti inzwe zviri nani.
Sei katsi yangu ichindiruma nguva dzese pandinoedza kuibata?
Sei katsi yangu ichindiruma nguva dzese pandinoedza kuibata? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tichakuudzawo maitiro ekugadzirisa dambudziko.
Kufanana pakati pekati dzesango uye katsi dzekumba
Pinda uye isu tinokuudza kuti ndedzipi fanano pakati pekati dzesango uye katsi dzekumba kuitira kuti iwe uzive kuti dzakafanana sei kune imwe neimwe.
Sei katsi dzichibuda nekuuya kumba
Ungada here kuziva kuti sei katsi uye kuuya kumba? Pinda uye isu tichakuudza kuti ndezvipi zvikonzero zvekuti vadaro. Usapotsa.
misiyano pakati pembwa nekatsi
Ndeupi musiyano uripo pakati pekati nembwa? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tichakuudza kuti ndeapi iwo kuti zvive nyore kwauri kuti utore sarudzo pane imwe kana imwe.
Chikafu chemakati mapfupi-ane bvudzi
Chii chinofanirwa kuve chikafu chekati-dziye-katsi katsi? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye tinokuudza zvavanofanira kudya kuti vave neutano hwakanaka.
Nhengo yemarutsi yekatsi: ndeyei?
Wati wakambozvibvunza here kuti nhengo yemarutsi yemakatsi ndeyei? Kana chako chakamboita chiso chinoshamisa, pinda;).
Kukosha kwekudzivirira kuberekwa mumakati
Uri kuronga kurera katsi yako? Chekutanga pane zvese, pinda uye isu tikutaurire kuti nei zvichikosha kuti uzive kukosha kwekudzivirira kuberekwa mumakati.
Zvakakosha here kushamwaridzana nekatsi?
Zvakakosha here kushamwaridzana nekatsi? Iye anonzi akasurukirwa zvikuru uye akazvimiririra, asi nei achifanira kudzidza kugara nevanhu?
Ungaziva sei kuti kati yangu inorara zvakanyanya
Ndinoziva sei kuti katsi yangu inorara zvakanyanya? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tinokuudza iwe kuti mangani maawa ane hutano ane hura akarara uye zvekuita kana vakarara zvakanyanya.
Katsi dzinogona kurasikirwa nenzwi radzo here?
Katsi dzinogona kurasikirwa nenzwi radzo here? Kana iwe uine kusahadzika nezvazvo, pinda uye isu tichakuudzawo zvekuita kuvabatsira. Usapotsa.
Spina bifida mumakati
Spina bifida mumakati kuzvarwa kwakaipa kunogona kukonzera matambudziko mazhinji ekufamba. Pinda tinokuudza zvese nezvazvo.
Katsi yangu inodzedzereka kana ichifamba, ndingaibatsira sei?
Kana katsi yangu ichidzedzereka kana ichifamba, ndingamubatsira sei? Kana iwe uchida kuziva mhinduro, pinda uye isu tichakuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvenyaya iyi.
Nzira yekugadzirira kuberekwa kwekati?
Isu tinotsanangura nzira yekugadzirira kuberekwa kwekati. Pinda uye uwane zvese zvaunofanirwa kuita kuti zvifambe zvakanaka.
Sei katsi dzinoviga tsvina yadzo
Nei katsi dzinoviga tsvina yadzo? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tinozvigadzirisa zvese. Tsvaga kuti sei vaine hunhu uhu.
Pulmonary hypertension mumakati
Isu tinokuudza zvese nezve pulmonary hypertension mumakati, chirwere chakakomba kwazvo chinofanirwa kuzivikanwa nekunaka kwekitsi dzedu dzine mvere.
Chii chekuita zuva rekutanga katsi inouya kumba?
Chii chekuita zuva rekutanga katsi inouya kumba? Kana uine kusahadzika, pinda tigozvigadzirisa zvese kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Nzira yekutarisira katsi yemwedzi mina yekuzvarwa?
Nzira yekutarisira katsi yemwedzi mina yekuzvarwa? Kana iwe uchangotora imwe kana yako furry iri kuzosvika pazera iro, pinda uye isu tinokuudza maitiro ekumuchengeta iye kuti afare.
Godo pakati pekati nembwa
Nzira yekudzivirira godo pakati pekati nembwa? Kana iwe uchangobva kutora imbwa uye iwe uchida kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka, pinda utevere kuraira kwedu. ;)
Katsi Dzinogona Kudya Blueberries?
Katsi Dzinogona Kudya Blueberries? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tinokutsanangurira kana iri zano rakanaka kuvapa kuti vaedze kana kana, zvinopesana, zviri nani pane kwete.
Maitiro ekusimbisa immune system mumakati
Nzira yekusimbisa sei immune immune mumakati? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye tichazvigadzirisira iwe. Tsvaga maitiro aungave uine hutano furry.
Katsi dzinodya zviyo here?
Katsi dzinodya zviyo here? Kana iwe uchida kuziva kana idzi furry dzinogona kudyiswa pamwe nemidziyo iyi, pinda uye isu tichapindura mubvunzo wako.
Sei katsi yangu isiri kuita chinhu
Sei katsi yangu isiri kuita chinhu? Kana iwe uchida kuziva kuti nei furry yako isiri kushanda, pinda mukati uye isu tichakuudza izvo zvingave zviri kuitika kwairi.
Nzira yekudzivirira kupatirwa muvacheche kittens?
Pinda tinokuudza maitiro ekudzivirira kupatirwa muvacheche kittens. Ita shuwa iwe unovapa ivo nechengetedzo yakanakisa kubva paudiki hwavo hwepakutanga.
Kufambidzana kwekitsi kuri sei?
Wati wambofunga here kuti katsi kushamwaridzana yakaita sei? Kana zvirizvo, pinda uye isu tobva tatsanangurawo maitiro aungaita kuti kititi yako ifare.
Aloe vera ine chepfu kumakati here?
Aloe vera ine chepfu kumakati here? Kana usina chokwadi. pinda uye isu tinokuudza kana zvakachengeteka kushandisa uyu mushonga wekurapa mune felines.
Nei katsi dzichinanzva?
Nei katsi dzichinanzva? Kana iwe wakambozvibvunza iwe uyu mubvunzo, pinda uye ini ndichagadzirisa chakavanzika kwauri. Usapotsa.
Mazita eEgypt emakiti
Wakangotora imwe ine furry here? Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mazita eEgypt emakiti iwe aunogona kuapa. Kune akawanda! Usapotsa.
Isu tinokuudza kuti aromatherapy yekitsi chii uye chii chinoita. Mushonga wepanyama unogona kuvabatsira kukunda mamiriro akaoma uye zvirwere.
Nzira yekuziva sei kuti kati yangu ine mudumbu inorwadza
Ndoziva sei kuti katsi yangu inorwara nemudumbu? Pinda uye isu zvakare tichakuudza zvaunogona kuita kuti uvandudze nekukurumidza sezvazvinogona.
Mhando dzekushaya ropa mumakati
Isu tinokuudza iwe nezve dzakasiyana mhando dzekushomeka kwekitsi, pamwe nezviratidzo uye kurapwa kwechirwere ichi.
Nzira yekudzivirira kushushikana mumakati?
Pinda uye isu tinokuudza maitiro ekudzivirira kushushikana mumakati kuti vafare kwazvo newe. Tevedza kuraira kwedu uye iwe uchaona kuti hazvizonetse zvachose. ;)
Rubatsiro rwekutanga mumakati
Tsvaga nezve chekutanga rubatsiro kune katsi kuti iwe uzive maitiro ekuita kana imbwa dzako dzine huni dzapinda munyatwa.
Acral inonanzva granuloma mumakati
Chii chinonzi acral lick granuloma mumakati? Kana iwe zvakare uchida kuziva kuti chii zviratidzo uye kurapwa ndeapi, pinda mukati uye uwane.
Pinda uye uwane zviratidzo uye kurapwa kwemastitis mumakati, dambudziko rinogona kuvabata mushure mekubata pamuviri.
Colitis mukatsi chirwere chinovaitisa kusagadzikana kukuru. Pinda uye isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive kuti vagadzirise nekukurumidza sezvazvinogona.
Nzira yekudzikamisa kati panguva yedutu
Nzira yekudzikamisa kati panguva yedutu Kana furry rako riine nguva yakaoma kana paine imwe, pinda tinokuudza zvekuita kuti ugare wakadzikama.
Matipi ekujairira katsi kunzvimbo nyowani
Tinokupa iwe akateedzana matipi ekujairira katsi kunzvimbo nyowani kuitira kuti kufamba kuve nyore kune wese munhu.
Zvekuita kana kati isingakwanise kuita weti
Chii chekuita kana kati isingakwanise kuita weti? Kana furry yako ine matambudziko kubuda, pinda uye isu tinokuudza iwe matanho api aunofanira kutora kuti uwanezve.
Pharyngitis mumakati chirwere chinorapika zviri nyore zvakare chiri nyore kudzivirira. Pinda tinokuudza zvese nezvazvo.
Nei katsi yangu ichiita ruzha kana ichifema?
Nei katsi yangu ichiita ruzha kana ichifema? Kana iwewo uchida kuziva kuti ungamubatsira sei, pinda tinokuudza zvekuita.
Sei katsi dzedu dzichiramba dzichivhima?
Sei katsi dzedu dzichiramba dzichivhima? Kana iwe uchida kuziva mhinduro yemubvunzo uyu, usazeze: pinda uye isu tichakuudza.
Kudzidzira kwekatsi dzekumba
Pinda uye uone kuti nei kurovedza muviri kuchikosha kumakati epamba uye kuti ungazviita sei kuti vafare.
Nzira yekutarisira katsi muzhizha
Ungade here kuziva machengeterwo ekatsi muzhizha? Pinda uye isu tinokuudza zvese zvaunofanirwa kuita kuitira kuti furry yako inakirwe nechiteshi.
Natural zvinowedzera kune katsi
Ungade here kuziva kuti ndezvipi zvinowedzerwa katsi uye kana iri zano rakanaka kuti vatore? Pinda uye isu tichagadzirisa kusahadzika kwako. :)
Dzimwe nzira kune iyo Elizabethan kora mumakati
Iko furry yako yakangoitwa oparesheni here? Pinda uye isu tinokuudza iwe dzimwe nzira dzeye Elizabethan kora pane katsi dziripo kuti iwe unzwe kugadzikana.
Nzira yekutarisira katsi mapedhi?
Nzira yekutarisira katsi mapedhi? Kana iwe uchida kuziva kuti ungaita sei kuti furry yako ive navo zvakakwana hutano, pinda.
Giardiasis mumakati chirwere cheparasiti chakakomba uye chinotapukira. Kana ikasarapwa munguva, inogona kuuraya. Pinda kuti uzive zvese nezvake.
Katsi yangu yakatsamwa here?
Katsi yangu yakatsamwa here? Kana iwe uchida kuziva mhinduro kumubvunzo uyu, usazeze: pinda uye isu tichakuudzawo zvaunofanira kuita kuti uwanezve chivimbo chako.
Maitiro ekutaura nekatsi anotya
Isu tinotsanangura nzira yekutaura nekatsi inotyisa nhanho nhanho. Kunyangwe iwe uchangotora imwe chete kana kuda kunhonga imwe kubva mumugwagwa kana nyika, pinda.
Zvekuita kana katsi yangu yashatisa ganda
Kana iwe uchinetseka zvekuita kana katsi yangu yashatisa ganda, usazeze: pinda uye isu tichakupa akati wandei matipi ayo achabatsira kwazvo kukubatsira iwe.
Nguva yekutamba nekatsi?
Ungade here kuziva nguva yekutamba nekatsi? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tichakuudzawo kangani nguva yaunofanira kupedza nguva uchinakidzwa.
Kushungurudzwa mumakati kunofanira kunyangarika nekukurumidza sezvazvinogona. Hazvina zvazvinobatsira. Kana iwe uchida kuziva kuti ungabatsira sei mukadzi wemukomana wechirwere ichi, pinda.
Nei katsi yangu isina neuteni ichiramba ichimaka?
Nei katsi yangu isina neuteni ichiramba ichimaka? Kana iwe uchinetseka izvi, pinda mukati uye isu tichakuudza iwe kuti ndezvipi zvikonzero uye zvaungaite kuzvidzivirira.
Ndinoziva sei kuti katsi yangu inonyara?
Kana iwe uchinetseka kuti ungaziva sei kana katsi yangu ichinyara, pinda mukati ini ndikuudze zvaunofanira kutsvaga kuti uwane. Usapotsa.
Nzira yekubvisa nhata kubva mubindu ine diatomaceous pasi
Iwe unoda here katsi dzako mbiri uye iwe kuti ugone kunakidzwa nekunze? Pinda uye uone kuti ungabvisa sei fleas kubva mubindu ine diatomaceous pasi.
Zvinhu zvaunofanira kuziva usati uine katsi kumba
Isu tinokuudza iwe kuti ndezvipi zvinhu zvaunofanira kuziva usati waita katsi kumba, zvinhu izvo zvisiri munhu wese achakuudza. Kupinda.
Katsi dzinosuwa varidzi vadzo here?
Katsi dzinosuwa varidzi vadzo here? Kana iwe uchida kuziva mhinduro yemubvunzo uyu, pinda uye isu tichazvizarurira kwauri. Zvingakushamise iwe;).
Katsi dzinotaurirana sei?
Katsi dzinotaurirana sei? Kana iwe uchida kuziva mhinduro yemubvunzo uyu, usazeze: pinda.
Ungaita sei kuti uve nekatsi inofara uye ine hutano
Ungaita sei kuti uve nekatsi inofara uye ine hutano? Kana iwe uchida kuti shamwari yako inzwe kugadzikana kwazvo newe, usazeze: pinda uye ini ndokuudza zvese zvaunofanirwa kuita.
Katsi yangu inondidzivirira: nei?
Dzimwe nguva tinogona kuverenga mumwe munhu achiti "kati yangu inondidzivirira." Iyi imhuka inogona kudzivirira kwazvo munhu wayo, asi nei? Kupinda.
Kuchengeta katsi dzakaremara
Isu tinokuudza iwe kutarisirwa kwekatsi dzakaremara kuti iwe ugone kuita yako furry mhuka inofara uye yakadzikama.
Maitiro ekuratidza rudo kune kati
Nzira yekuratidzira rudo kune kati? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye tinokuudza zvaunofanira kuita kuti furry yako inzwe kudiwa kwazvo.
Isu tinokuudza maitiro ekudzivirira kufutisa mumakati, dambudziko rinogona kuvakonzera kusagadzikana kukuru uye kurwadziwa kana isu tikasaita chinhu kuti tizvidzivise.
Matipi ekudzivirira katsi kubva pakupisa
Tinokupa matipi akati wandei ekudzivirira katsi kubva pakupisa. Dzivirira shamwari dzako dzine hura kubva pakuve nenguva yakaipa mukati mezhizha! Kupinda.
Nzira yekugadzirira nyama yekatsi?
Isu tinokuudza iwe kuti ungagadzirira sei nyama yekatsi. Tsvaga kuti ungafudza sei katsi yako nenzira ine hutano uye uwane muhutano hwakanaka.
Perianal fistula mumakati
Perianal fistula mumakati haina kujairika, asi inokonzeresa kusagadzikana uye kurwadziwa. Pinda uye isu tinokuudza iwe matanho api aunofanirwa kutora kuti vadzore.
Sei katsi dzichiruma makumbo adzo?
Sei katsi dzichiruma makumbo adzo? Kana vako vane furry vatanga kuzviita uye iwe usingazive nei, pinda mukati uye isu tichakuudza iwe zvekuita kuzvidzivirira.
Sei katsi dzinovhima shiri?
Isu tinotsanangura kuti sei katsi dzinovhima shiri nedzimwe mhuka uye nezvaungaite kuti uzvidzivirire. Pinda uye uwane zvimwe pamusoro peizvi felines.
Hypothermia mumakati idambudziko rinogona kuvakuvadza zvakanyanya. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chii zviratidzo uye kurapwa kwavo.
Ndezvipi zviratidzo zvehosha yeitsvo mumakati?
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zviratidzo zvehosha yeitsvo mumakati, uye kuti ungaita sei kuti shamwari yako irambe ichirarama hupenyu hwakajairika.
Nzira yekubvisa inda mumakati?
Huru yako inokwenya yakawanda here? Pinda uye uone kuti inda dzakaita sei mumakati, zviratidzo zvavanokonzeresa uye, zvinonyanya kukosha: maitiro ekuzvibvisa.
Nei katsi yangu ichinyanya kuwanda?
Uri kushamisika kuti nei katsi yangu ichinyanya kuwanda? Zvakanaka, usazeze: pinda uye isu tichakuudza izvo zvinogona kukonzeresa uye matanho api aunofanira kutora kana zvichidikanwa :).
Isu tinokuudza zvese nezve kurumura katsi: riini uye sei zvinoitwa, nei zvichikosha kuti ivo vave naamai, uye nezvimwe zvakawanda.
Sei katsi dzichirutsa?
Isu tinokuudza kuti sei katsi dzichirutsa uye matanho api aunofanira kutora kudzivirira kuti varege kuzviitazve. Pinda usarasikirwa nazvo.
Kuziva sei kana iri katsi kana katsi
Unoziva sei kana iri katsi kana katsi? Kana iwe uine kusahadzika, pinda uye isu tinozvigadzirisa zvese. Tsvaga kuti ungawana sei kuti yako feline murume kana mukadzi.
Katsi dzinofamba sei?
Ungada here kuziva kuti katsi dzinofamba sei? Eya, mira zvakare: pinda uone kuti vanokwanisa sei kuenda kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe vasina kuita ruzha.
Nei uchifanira kukwesha kati
Kana iwe uchida kuziva kuti nei uchifanira kukwesha kati, usazeze: pinda uye isu tikutaurire iwe zvikonzero nei zvakakosha kuyeuka kuzviita :).
Sei katsi yangu isingadye?
Uri kushamisika kuti nei kati yangu isingadye? Kana zvirizvo, pinda mukati uone kuti ndezvipi zvikonzero zvekushaikwa kwechido uye zvaungaite kuti ubatsire.
Nzira yekudzivirira sei katsi kuti isadye nekukurumidza?
Tinokuudza maitiro ekudzivirira kati kuti isadye nekukurumidza kuitira kuti irege kuisa njodzi yekudzipwa kana kutambura chero matambudziko. Kupinda.
Nzira yekubvisa gasi mumakati
Tsvaga maitiro ekudzora gasi mumakati kuti iwe ugone kuziva kana ako ane furry ane. Pinda uye isu tinokuudza iwe izvo zvinokonzeresa kubiridzira uye zvaunofanira kuita kuvabatsira.
Sei mhango dzichionekwa mumakati?
Mhara mumakati hadziwanzoitika, asi dzinorwadza zvikuru. Pinda uye uone kuti ungagadzirisa sei dambudziko kuti furry yako irambe ichitungamira hupenyu hwakajairika.
Inguva ipi yekuchinja marara ekati?
Tsvaga nguva yekuchinja marara ekatsi kuti arambe achifara uye akasununguka nekugezesa kwake ega. Dzivisa kushamisika kusingafadzi. ;)
Sei katsi dzichiita sezuva?
Wati wamboshamisika here kuti nei katsi dzakaita sezuva? Pinda uye isu tichagadzirisa kusahadzika kwako kuitira kuti iwe ugone kuvanzwisisa zviri nani.
Maitiro ekuita kuti kati yangu isadye zvirimwa?
Maitiro ekuita kuti kati yangu isadye zvirimwa? Kana iwe uchida kudzivirira matambudziko anomuka, pinda uye isu tinopindura mubvunzo wako.
Sei maziso ekatsi achipenya murima?
Sei maziso ekatsi achipenya murima? Kana iwe uchida kuziva kuti nei izvi zvichiitika, usazeze: pinda kuti tigone kupindura mubvunzo wako!
Katsi dzine godo here?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzine godo? Kana iwe uchida kuziva mhinduro, pinda uye isu tinogadzirisa zvakavanzika kwauri.
Katsi dzinodzidza sei?
Iwe unoziva here kuti katsi dzinodzidza sei? Kwete? Zvakanaka, pinda uye isu tichakubatsira iwe kuvanzwisisa zviri nani zvakanyanya kuti zvive nyore kwauri kuti utaure navo.
Artist inogadzira diki mifananidzo yekitsi
Isu tinokuratidza iro basa reanoshamisa Artist uyo anogadzira diki maratidziro ekitsi, chimwe chinhu chingave chiri chikuru chipo cheanofarira. ;)
Nzira Yekudzidzisa Katsi Yako Kuti Uuye Paunosheedza
Isu tinokuudza maitiro ekudzidzisa katsi yako kuenda kana iwe uchidana nhanho nhanho. Tsvaga zvaunofanira kuita kuti vauye kwauri.
Ndomisa sei kati yangu kubva meowing?
Isu tinokuudza maitiro ekuita kuti kati yangu irege kumira. Zvekare tsvaga kuti ndezvipi zvikonzero zvekuzviita, uye tora matanho akakodzera ekubatsira.
Maitiro ekugadzira iyo yekuzvigadzirira pipette yekitsi
Isu tinokuudza maitiro ekugadzira iyo yekuzvigadzirira pipette yekitsi. Dzivirira furry yako kubva pakuve nezvipembenene nemushonga unoshanda wepamusha.
Chii chinonzi chemotherapy kumakati?
Chemotherapy yekatsi chirwere chekenza feline iyo vet yako inogona kukurudzira. Pinda uye isu tichakuudza izvo zvinoumbwa uye ndeapi mhedzisiro mhedzisiro angangoonekwa.
Zvese nezve salmonellosis mumakati
Salmonellosis mumakati chirwere chebhakitiriya chinogona kukonzera matambudziko mazhinji kumatehwe ane furry. Pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chii zviratidzo uye kurapwa chii.
Matipi ebvudzi rakakwenenzverwa mumakati
Tinokupa matipi akati wandei kune akakwenenzverwa bvudzi mumakati kuti iwe ugone kuziva zvekuita kana yako furry iinayo. Kupinda.
Kudya kwe hypoallergenic kwekitsi kunofanirwa kunge kuri sei?
Pinda kuti uzive kuti hypoallergenic yekudya kwekatsi inofanira kunge iri sei, uye tora yako furry kuti ive noutano hwakanaka nekuipa iyo yemhando yekudya.
Ndezvipi zviratidzo zvekushushikana mumakati?
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zviratidzo zvekushushikana mumakati kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti uzvione. Pinda uye uone zvakare kuti inorapwa sei.
Zviratidzo uye kurapwa kwembwa mumakati
Isu tinokuudza zvese nezve inda mumakati: zvavari, zviratidzo zvavanokonzeresa uye, zvakanyanya kukosha, kurapwa kwavo kuti vadzivise kukonzeresa imbwa dzedu dzine mvere.
Nzira yekutarisira katsi yekufa?
Isu tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi yekufa pfuti kuitira kuti iwe ugone kumupa rubatsiro rwainoda. Pinda uye iwe zvakare uchaona maitiro ausingafanire kuita panguva yekubata.
Nzira yekugadzira pamba yekugeza shampoo yekitsi?
Iwe unofanirwa here kuziva maitiro ekugadzira yakagadzirirwa katsi nhata shampoo? Kana zvirizvo, pinda mukati uye ini ndichatsanangura zvakadzama maitiro aungaite aya maparasiti kuti asiye feline yako wega neshampoo yakagadzirwa newe.
Nei katsi dzichiridza muridzo?
Nei katsi dzichiridza muridzo? Kana iwe uchida kuziva kuti nei vachiita nenzira iyi, pinda uye isu tichapindura mubvunzo wako. Usapotsa.
Zvese nezvekushomeka kwemvura mumakati
Isu tinokuudza zvese nezve kushomeka kwemvura mumakati: zviratidzo, kurapwa uye nezvimwe zvakawanda. Pinda uone kuti ungaitei kana uchifungidzira kuti imbwa dzako dzine mvere hadzisi kunwa mvura yakakwana.
Unogona here kushandisa imbwa sipo katsi?
Unogona here kushandisa imbwa sipo katsi? Kana iwe uine uyu mubvunzo, usazeze uye pinda kuti uone kana iri zano rakanaka kushandisa ichi chigadzirwa kana kwete.
Katsi dzinogona kupihwa valerian?
Iwe ungade here kuziva kana valerian inogona kupihwa katsi? Kana zvirizvo, pinda mukati tikutaurire kuti zvakaita sei uye zvinokanganisa sei mhuka idzi.
Iko rusununguko rwe5 rwekugara kwemhuka
Isu tinokuudza kuti ndedzipi rusununguko rusununguko rwemhuka, idzo isu tese tinogara nehunhu dzinofanirwa kutevedzera kuitira kuti vanhu vane furry vafare.
Ndezvipi zvinoumbwa nefidha yekitsi dzakaomeswa?
Isu tichakuudza nezve kuumbwa kwechikafu chesaka chakaomeswa uye kuti chinofanira kunge chiri chehunhu chaihwo kuitira kuti furry yako iride uye inzwe zvakanaka.
Ndezvipi zvakanakira nekuipira zvakavharwa nekati marara bhokisi?
Iyo yakavharwa katsi marara bhokisi chinhu chinonakidza kwazvo sezvo ichideredza hwema uye yakachena kwazvo. Asi ndezvipi zvakanakira nekuipira? Vazvizive.
Leishmaniasis mumakati, chirwere chine njodzi uye chisingazivikanwe
Leishmaniasis mumakati chirwere chidiki kwazvo chinozivikanwa. Kuti tiwedzere kuita kudaro, tinotsanangura kuti chii uye chii zviratidzo.
Chii chinonzi cat vibrissae?
Isu tinokuudza kuti chii katsi vibrisas uye chii chavari kuitira kuti iwe ugone kudzidza zvakawanda nezve idzi dzakanaka mhuka.
Nzira yekuona sei kuruma kuruma kurwisa mumakati?
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kweflea inoruma allergy mumakati? Kana iwe uchifungidzira kuti furry yako inayo, pinda mukati uye tinokuudza maitiro ekumubatsira.
Kudya kwechikafu nekatsi nehepatitis kunofanirwa sei?
Isu tichakuudza kuti kudya kwekatsi ine hepatitis kunofanirwa kunge kuri kuitira kuti, nenzira iyi, iwe ugone kuvabatsira kuti vave noutano hwakanaka.
Ndezvipi zvakanakira nekuipira kuve nekatsi mufurati?
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zvakanakira nekuipira kuva nekatsi mufurati. Pinda uye iwe unogona kuona kana iri zano rakanaka kutora rimwe kana kwete.
Huchi hwakanaka kumakati here?
Uri kushamisika kana huchi hwakanakira katsi here? Kana zvirizvo, pinda uye iwe zvakare uchaona kuti kangani uye yakawanda sei iwe yaunogona kuvapa ivo.
Zvese nezve euthanasia mumakati
Euthanasia mumakati ndechimwe chezvinhu zvakaomesesa zvatichafanira kuita muhupenyu hwedu hwese. Pinda uye isu tichakuudza kuti zvinoitwa sei uye kupi.
Zvese nezveArthritis mumakati
Arthritis mumakati chirwere chinokonzera iwo marwadzo mazhinji uye kusagadzikana. Tsvaga kuti ungaiona sei uye nezvaungaite kuti vagone kuva nehupenyu hwakanaka.
Maitiro ekuona colitis mumakati?
Isu tinotsanangura maitiro ekuona colitis mumakati kuitira kuti iwe uzivewo kuti chii zviratidzo uye kurapwa kwavo. Usapotsa.
6 zviratidzo zvekurwadziwa mumakati
Tinokuudza kuti ndedzipi zviratidzo zvitanhatu zvinowanzoitika zvekurwadziwa mumakati kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti uzvizive uye utore matanho.
Maitiro ekuchenesa mataresi akaraswa
Unoda here kuziva kuchenesa mateti yakamutswa? Pinda uye uwane zvaunoda uye matanho api aunofanirwa kutevera kuti uichenese uye zvekuita kudzivirira kuti zvirege kuitika zvakare.
Ndezvipi chikafu chakazara nesimbi kumakati?
Isu tinokuudza kuti ndeipi mweya wakafuma-simbi wekatsi uye nei zvakakosha kuti uvape chicherwa ichi. Pinda uone.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve otitis mumakati
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve otitis mumakati, chirwere chakajairika kwazvo chinokonzera kusagadzikana kukuru. Pinda uye uone kana furry yako inayo uye nezvamungaite kumubatsira.
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwegingivitis mumakati?
Isu tinokuudza zvese nezve gingivitis mumakati, chimwe chezvirwere zvakajairika zvemumuromo mune idzi mhuka. Kupinda.
Chii chinonzi catnip uye ndechei?
Wanga uchiziva here kuti katsi dzakawanda dzinonakidzwa nechero chirimwa? Iyo catnip, uye zviri nyore kwazvo kutarisira. Pinda uone zvese nezvake.
Chii chinonzi feline pheromones?
Isu tichakuudza kuti ndeapi maheromone uye kuti ndeapi anobatsira katsi. Pinda uye uwane zvimwe nezve feline kutaurirana.
Chii chinoumbwa nekatsi chikafu?
Isu tinokuudza iwe kuti chii chinoumbwa nechikafu chekati uye kuti ungadudzira sei zvinyorwa zvezvinhu zvinogadzira izvozvo
Katsi yaPallas yakaita sei?
Katsi yaPallas inyoka yemhara pane izvo zvishoma zvinozivikanwa, asi imhuka yakanaka zvekuti haikusiye usina hanya. Kupinda.
Ndeipi kati inodhura pasi rose?
Uri kushamisika kuti ndeipi katsi inodhura kwazvo pasirese? Kana zvirizvo, pinda uye uwane zita rayo, hunhu uye mutengo wayo.
Zvinorevei nzvimbo dzemhino mumakati?
Uri kunetseka nezve mavara pane ako katsi mhino? Pinda uye isu tinokuudza zvavari uye kuti unofanira kuenda navo kun'anga.
Himalaya katsi, inonaka feline
Iyo Himalaya katsi yakanaka tsvarakadenga yauchazoda kupuruzira zuva rega rega ... yakawanda nguva! Uye chinhu chakanakisa ndechekuti achanakirwa nacho. Ungada here kusangana naye? Kupinda!
Ndeapi katsi mazino zvirwere?
Ndeapi mazino zvirwere zvekatsi? Kana iwe uchida kuziva kuti ndeapi anokanganisa aya ane furry zvakanyanya, usazeze: pinda.
Chii chinonzi pombi dzemakati?
Imwe nzira yekudzivirira uye kubvisa zvipembenene mumhuka dzedu ndeyezviputi zvemakati. Pinda uye isu tinokuudza zvavari uye kuti ungaaisa sei.
Nzira yekubatsira sei inotyisa kati?
Nzira yekubatsira sei inotyisa kati? Kana shamwari yako yakahwanda uye isinganzwe kufara, pinda tinokuudza zvaunogona kuti umubatsire.
Chii chakaita Red Point Siamese?
Iyo Red Point Siamese katsi imhuka ine rudo uye yakadzikama iyo inokunda moyo yemhuri yese. Pinda ugozviziva.
PIF mumakati, chirwere chinotyisa
FIP mumakati, kana Feline Infectious Peritonitis, chirwere chinokanganisa immune system yeiyo feline. Kunze kwekunge ichirapwa munguva, iri kutyisidzira hupenyu. Pinda uye isu tichakuudza zvese nezve iyo PIF.
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwehyperthyroidism mumakati?
Iko furry yako iri kudzikira uremu kunyangwe uchidya zvakanyanya kupfuura zvakajairwa? Kana zvirizvo, pinda uye tinokuudza zvese nezve hyperthyroidism mumakati.
Katsi inorarama makore mangani emunhu
Makore mangani emakore anogara katsi? Kana iwe uchida kuziva zera remunhu rine furry yako, pinda uye uwane. Ichokwadi chinokushamisa iwe. ;)
Chii chinonzi quadrivalent jekiseni remakati?
Mushonga wekudzivirira katsi wecadrivalent ndeimwe yezvakakosha zvikuru zvaunofanira kupa sezvo iri imwe yekutanga inosimbisa immune system yako. Tsvaga kuti yakaiswa riini uye chii chainodzivirira kubva.
Kuchekerera kwembambo dzekatsi
Isu tinotsanangura kuti riini uye sei kucheka nzara dzekati kuti iwe ugone kuzvitarisira. Pinda uye uwane zvaunofanira kuita kuti ucheke.
Ungasarudza sei anonwisa kati?
Ungasarudza sei anonwisa kati? Kunyangwe iwe uchizotora imwe ine furry kana kana iwe uchida kuchinja tsime rekunwa rekatsi yako, pinda uye isu tinokuudza iwe dzakasiyana mhando dziripo kuti iwe ugone kusarudza zvakakunakira iwe neshamwari yako.
Chii chakaita katsi yeBurma?
Katsi yeBurma imhuka yakanaka uye ine rudo inokurumidza kukunda mwoyo yemhuri yese. Pinda uye uwane zvimwe nezve yako inogona kuita shamwari nyowani. :)
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwepancreatitis mumakati?
Tsvaga kuti chii chinonzi pancreatitis chiri mumakati: kuongororwa kunoitwa sei, ndezvipi zviratidzo uye chii chinofanirwa kuitwa kuti uvadzikise nekukurumidza sezvazvinogona.
Katsi Dzinogona Kudya Pasita?
Wakambozvibvunza here kuti katsi dzinogona kudya pasita? Kana iwe uchida kuziva kana iwe uchigona kufudza izvi kune yako furry, pinda uye uwane mhinduro.
Katsi mbiri dzinogona kushandisa imwechete marara bhokisi?
Unoda kuziva here kuti katsi mbiri dzinogona kushandisa imwechete marara bhokisi? Kana zvirizvo, pinda uye isu zvakare tichakuudza kuti ndeapi marudzi emarara mabhokisi aripo kuti iwe ugone kusarudza kuti ndeipi yaunosarudza.
Imbwa dzakanakisa dzekatsi
Uri kuronga kuunza imbwa kumhuri here? Kana iwe uchinge uchirarama nechembere, pinda tinokuudza kuti imbwa dzipi dzakanakisa dzekatsi.
Chii chinonzi kurapwa kwetrabismus mumakati?
Strabismus mumakati chinhu chisina kunaka chinogona kukanganisa chero kubereka kana kuyambuka. Pinda uye uone kuti ndezvipi zvikonzero uye kurapwa.
Chii chinonzi uye sei uveitis mumakati inorapwa?
Uveitis mumakati chirwere cheziso chinogona kuve chakakomba. Pinda kuti uone kuti chii, chii zviratidzo uye kuti inorapwa sei.
Matipi ekutora katsi
Unoronga kukura mhuri? Tevedza kuraira kwedu kutora katsi uye iwe uchaona kuti zvinonakidza sei kuva nefuru pamba.
Ndezvipi zvakanak kuva nekatsi pamba?
Kana iwe uchida kutora feline asi iwe usina chokwadi kuti ndeapi mabhenefiti ekuva nekatsi pamba, usazeze, pinda uye isu tichakuwanira iwo.
Zvakajairika here kuti katsi dzevanhu vakuru dzibvise mazino?
Zvakajairika here kuti katsi dzevanhu vakuru dzibvise mazino? Kana shamwari dzako dzine mvere dzichirasikirwa nemeno uye iwe usingazive nei, pinda mukati tigopindura mubvunzo wako.
Chii chandingaite kana katsi yangu ichidya zvakanaka asi yakatetepa?
Chii chandingaite kana katsi yangu ichidya zvakanaka asi yakatetepa? Kana iwe uchifungidzira kuti furry yako haina kunyatsonaka, usazeze: pinda.
Nei katsi yangu ichindiperekedza kunogeza
Uri kushamisika kuti sei katsi yangu ichienda neni kuchimbuzi? Kana iwe uchida kuziva kuti nei achizvibata nenzira iyi, usazeze, pinda.
Zvinhu izvo katsi dzinoda
Isu tinokuudza kuti ndezvipi zvinhu izvo katsi zvinoda kuitira kuti iwe ugone kusvika pakuzviziva zviri nani, nokudaro uchivaita kuti vavimbe newe nekukurumidza.
Ndeapi kugona kwekitsi?
Ndeapi kugona kwekitsi? Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve idzi dzakanaka mhuka, usazeze: pinda uye uone izvo zvavanokwanisa kuita.
Hunhu hwe katsi hwakadii
Wakambozvibvunza here kuti hunhu hwematsi hwakafanana sei? Kana iwe uchida kuziva mhando shanu dzekatsi hunhu huripo, usazeze: pinda mukati uone kuti ndeupi wako iwo ako furry iwo.
Chii chinonzi Noah syndrome?
Noa Syndrome chirwere chepfungwa chinokanganisa vanhu vazhinji uyezve mhuka zhinji. Tsvaga kuti chii uye zvaunogona kuita kuvabatsira.
Katsi ine feline leukemia inogara kwenguva yakareba sei?
Isu tinokuudza iwe kuti katsi ine feline leukemia inorarama sei uye zvaunogona kuita kuita kuti immune yayo ive yakasimba zvakakwana kuti ikwanise kurarama kwenguva yakati rebei.
Izvo zvakaita kushanda pamba nekitsi
Chii chakaita kushanda pamba nekitsi? Kana iwe uchida kuziva, pinda uye isu tinokuudza iwe kuti chiitiko chingave sei uye maitiro ekuita anogona kuvandudzwa.
Ndedzipi tsika dzekuzvarwa nekatsi?
Iwe unoziva here izvo zvakasarudzika hunhu hwekatsi? Kana iwe uine kusahadzika uye / kana uchida kuzviziva zvirinani, pinda uye uzviwane.
Kufamba kune dzimwe nyika nekatsi kunofanirwa kuve sei?
Kufamba kune dzimwe nyika nekatsi kunofanirwa kuve sei? Kana iwe uchironga kuenda kunogara kune imwe nyika, pinda uye isu tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive kuitira kuti furry yako igadzikane sezvinobvira.
Ko ari sei 'katsi ane hushamwari' mahofisi?
Isu tinokuudza iwe nezve 'zvine hushamwari katsi' mahofisi, nzvimbo dzebasa kwaunogona kushanda mukambani yekati yako. Kupinda.
Matipi ekuva nekatsi mbiri
Unoronga kukura mhuri yako? Kana zvirizvo, pinda uye uteedzere kuraira kwedu kuti uve nekitsi mbiri pamba kuitira kuti vagarisane nekukurumidza.
Zvaunofanira kuita kana kati yako ine ziso rakazvimba
Hauna chokwadi chekuita kana kati yako iine ziso rakazvimba? Pinda kuti uone kuti ndezvipi zvinonyanya kukonzerwa uye maitiro aunofanira kuita kuzvipedza.
Zvakanakira kunyorova katsi chikafu
Ndeapi mabhenefiti enyoro katsi chikafu? Kana iwe uchida kuziva kuti nei zvichikurudzirwa kwazvo kupa urwu rudzi rwechikafu kune furry yako, pinda.
Nguva yekuenda kunotsvaga katsi yakarasika
Hausi kuwana katsi yako? Ipapo usazeze: pinda uye isu tichakuudza iwe nguva yekuenda kunotsvaga katsi yakarasika nenzvimbo dzinogona iko kwainogona kuvanda.
Rini uye sei yekupa mubayiro katsi
Isu tinotsanangura kuti rini uye sei yekupa mubayiro kati kuti igone kuramba ichikura seyakafara uye ine hunhu hunhu. Kupinda.
Kusarudzwa kweasingaenderane nekatsi vatakuri
Wakaneta nekutakura katsi yako nemutakuri unotakurwa nemunhu wese? Zvakanaka, pinda uye iwe unogona kusarudza pakati akati wandei zvisingaenderane nevatakuri. Iwe une chokwadi chekuvada. ;)
Iyo yekuJapan katsi Maru
Kune akawanda katsi dzinozivikanwa pasi rese, asi hapana akafanana naMaru. Iyi furry, yerudzi rweScotland Fold, yakaonekwa kanopfuura mamirioni mazana matatu negumi nematanhatu kuYouTube. Pinda unosangana naye.
Kurera imbwa nekatsi
Haisi chokwadi chekurera imbwa nekitsi? Pindai mutevere kuraira kwedu kuti imi mose mugone kurarama hupenyu hunofadza pamwe chete.
Katsi inogara kwenguva yakareba sei pamba?
Katsi inogara kwenguva yakareba sei pamba? Hupenyu hunotarisirwa hwekati yekati imba inoenderana zvakanyanya nerudzi rwayo uye kuti inotarisirwa sei. Tsvaga zvekuita kuti ararame kwenguva yakareba.
Kuchengeta katsi mubindu
Isu tinokuudza maitiro ekuchengeta katsi mubindu. Kana iwe uchida kupa mutsva mukana wekuva nehupenyu hwakanaka hweakarasika furry munharaunda yako, pinda uteedzere kuraira kwedu.
Sei katsi dzichiita ruzha rwakawanda kana dzichisangana?
Wakambozvibvunza here kuti nei katsi dzichiita ruzha rwakawanda kana dzichisangana? Kana zvirizvo, pinda uye tichapindura mubvunzo wako.
Chii chekuita nekatsi yakarasika?
Chii chekuita nekatsi yakarasika? Kana tikawana mumwe akafirwa naamai, matanho api atinofanira kutora kumubatsira? Pinda uone.
Sei uchifanira kutamba nekatsi?
Isu tinotsanangura kuti nei uchifanira kutamba nekatsi. Tsvaga kuti nei zvichikosha kushandisa maminetsi mashoma pazuva kuti furry yako ifare.
Chii chikafu chisina mahara chemakati
Iwe unoziva here kuti chii chisina gorosi chikafu? Kana iwe uchida kufudza yako furry nechikafu chemhando yepamusoro, nekudaro uchiwana hutano huri nani, pinda uye tinokuudza kuti zvakanakirei.